DOSBox: Etu esi eji asụsụ DOS mmemme na GNU / Linux? | Site na Linux
Ndi anyi ji GNU / Linux Distros ugboro ugboro, anyị na-ejikarị ya eme ihe ọnụ (console), ebe ọ bụ naanị ndị ọrụ ole na ole Windows ha na-emekarị. Naanị ụfọdụ ndị ọrụ kacha ochie bụ ndị maara maka iji ya, ma, n'ihi mepụtara ngwanrọ ma ọ bụ na-egwuri egwu egwuregwu ndị gara aga.
Na mbụ, ọtụtụ ndị ọrụ nke GNU / Linux jisiri ike na-agba ọsọ dị otú ahụ ochie mmemme asụsụ ma ọ bụ ọnụ egwuregwu na DOS site na iji DOSEmu, ma ọrụ a anaghịzi arụ ọrụ, ma ejirila ngwa ahụ weghaara ọsọ ọsọ ahụ DOSBox, na-enye onye ọrụ ọ bụla ohere ịmeghachi oge ndị ahụ.
N'ihe banyere DOSEmu, nke aha ya putara DOS iulationomi, kwuru na ngwa kwere ka na-agba ọsọ a Sistemụ arụmọrụ DOS na ọtụtụ mmemme DOS, gụnyere ọtụtụ ngwa DOS DPMI (Ntinye DOS echedoro DOS o Usoro echedoro maka DOS) dị ka egwuregwu dị mfe nke ụdị Rome ka mgbagwoju software dika Windows 3.1, dị ala GNU / Linux. Nke bụ ihe kpatara ya, ọ dị mma maka ịgbanye asụsụ mmemme ochie ndị ahụ nke rụkwara ọrụ n'okpuru DOS, dịka Foxpro, Pascal na C, n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Otú ọ dị, DOSEmu ugbu a nwere ihe yiri mmepe, a na-akpọ EBERE nke emelitere, ma enwere ike ịnweta ya site na njikọ ndị a: EBERE.
Kama nke ahụ, DOSBox bụ usoro ihe eji eme ọgbara ọhụrụ na emelitere nke nwere otu ebumnobi, ya bụ, ọ bụ a DOS emulator nke ji Ọbá akwụkwọ SDL, nke na-eme nke ahụ DOSBox dị nnọọ mfe iji wụnye na dị iche iche nyiwe, dị ka Windows, BeOS, GNU / Linux, MacOS X, n'etiti ndị ọzọ.
Ọzọkwa, DOSBox na-eulatesomi ihe Ọnọdụ CPU: 286/386 ezigbo / echebe, XMS / EMS File Systems directory, Tandy / Hercules / CGA / EGA / VGA / VESA graphics, na SoundBlaster / Gravis Ultra Sound ụda kaadị, iji nweta a ndakọrịta kacha mma na okwu ochie ngwa, karịsịa Egwuregwu DOS.
1.1 Wụnye DOSBox
1.2 Hazie ma jiri DOSBox
DOSBox arụ ọrụ maka iche iche DEBIAN GNU / Linux Distros, dị ka ị pụrụ ịhụ na ndị na-esonụ njikọYa mere, enwere ike itinye ya ngwa ngwa site na njedebe (njikwa) site na iji usoro iwu ndị a:
sudo apt wụnye dosbox
Iji mee ya, ị nwere ike ịchọọ nchịkọta nhọrọ maka ngwa ahụ DOSBox emulator ma gbaba. Abụkarị nke a na-eji ngwa ngwa e dere dị ka a Atiya ngwa. «Egwuregwu». Ma ọ bụ na-eme site na njedebe (njikwa) iji iwu ndị a:
Hazie ma jiri DOSBox
Ozugbo meghere ma ọ bụ gbaa ọsọ, naanị ya online ntuziaka ma ọ bụ na ọnụ (nwoke dosbox) ma ọ bụ kpọtụrụ gị Wiki, ịmalite iji. Agbanyeghị, isi ihe ị ga - eme iji bido iji ya bụ ịrịgo a mebere Drive (Disk) C ebe a ga iche iche Mmemme DOS (gburugburu mmemme, egwuregwu na ngwa dị iche iche) na a ga-egbu. Dị ka e gosiri n'okpuru:
$ ugwu c / ụlọ / onye ọrụ / appdosbox $ c: $ cd folderx $ executable.exe
Cheta na: Ihe nchekwa "Ngwaọrụ" nwere ike iburu aha ị họọrọ, aha nke "Nchekwa" kwesiri ka edochie ya aha folda nke Usoro DOS (gburugburu mmemme, egwuregwu na ngwa dị iche iche) na ị depụtaghachiri na mbụ ka emee ya, na aha iwu ahụ "Executable.exe" Ọ ga-abụrịrị nke kwekọrọ na executable nke a ga-egbu iji malite ya. N'okwu anyị, anyị na-edepụta folda si FoxPro maka DOS.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, DOSBox na-atụ aro na gị Budata ngalaba, jiri ụfọdụ Eserese eserese (Frontend) ijikwa ya ma gbanwee asụsụ interface gaa n'asụsụ mpaghara gị, maka iji ya nke ọma. Na n'agbanyeghị eziokwu na, na ndepụta nke Na-eche ihu edebanyereghi ya DBGL, nke a dị ezigbo mma ma dịkwa mfe iji otu.
Dị ka i si hụ, DOSBoxỌ bụ fabulous DOS emulator nke a na-emebu na ochie DOS mmemme asụsụ na Windows ọ zuru oke ịrụ ọrụ. Ọ na-anọgide naanị ịchọ na ibudata ndị dị mkpa site na Internet maka ogbugbu ya.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «DOSBox», a bara uru ọnụ ụdị ngwá ọrụ, mfe iji wụnye na-eji na anyị Free na Mepee Sistemụ, nke na-enye anyị ohere igbu Ngwa DOS nke Windows platform, dị ka asụsụ ochie na egwuregwu, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » DOSBox: Etu esi eji asụsụ DOS mmemme na GNU / Linux?